गर्भाधारणको लागि सहि उमेर कति हो ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
गर्भाधारणको लागि सहि उमेर कति हो ?
गर्भावस्था एक संवेदनशिल समय हो । त्यसैले धेरै दम्पतीहरु कुन उमेर गर्भाधारणको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर सल्लाह लिन चाहन्छन् । करिअर तथा अध्ययन केन्द्रित भएकाले अहिले ढिलो विवाह गर्ने चलन बढ्दो छ । यसले करिअर तथा भविष्य राम्रो भए पनि प्रजनन्मा भने असर पुग्नसक्छ ।
३० वर्षभन्दा ढिलो सन्तान जन्माउन चाहने महिलामा बच्चा बस्न गाह्रो हुने तथा बच्चा बसे पनि आमा तथा बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नसक्छ । त्यसैले गर्भाधारणको लागि सहि उमेर कति हो भन्ने विषयमा डा.नितेश घिमिरेको सुझाव यस्तो छ:
– २५ देखि ३० वर्षको उमेरमा पहिलो सन्तान जन्माउनु उचित हुन्छ । किनकी यो समयमा महिलाहरुको आमाशयमा हुने अण्डाको संख्या निश्चित हुन्छ । प्रत्येक महिला आफ्नो आमाको पेटमा हुँदा नै अण्डाको संख्या निश्चित भईसकेको हुन्छ । त्यसैले हरेक महिलाहरुमा अण्डाको संख्या फरक फरक हुन्छ ।
– जति उमेर बढ्दै जान्छ अण्डाको संख्या घट्दै गईरहेको हुन्छ । हरेक पटक हुने महिनावारीमा एउटा अण्डा खर्च भईरहेको हुन्छ जस्ले गर्दा अण्डाको संख्या क्रमश घट्दै गईरहेको हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा स्वास्थ अण्डाहरुको संख्या घट्दै जाने भएकोले गर्भ रहने सम्भावना पनि कम हुन्छ । यदि अस्वस्थकर अण्डाबाट बच्चा भईहाल्यो भने पनि बच्चा खेर जाने, बच्चा अस्वस्थ हुने तथा बच्चामा विभिन्न समस्याहरु देखिन सक्छ ।
– सामान्यतया एक महिलाको आमासयमा ६ लाख देखि १० लाख अण्डा हुन्छ । २५ वर्ष उमेरसम्ममा ५० प्रतिशत फर्टाइल अण्डाहरु नै उत्पादन भैरहेको हुन्छ । ३० देखि ३५ उमेर पुग्दा १० प्रतिसत मात्र फर्टाइल अण्डा उत्पादन हुन्छ र यदि महिला ३५ वर्ष उमेर नाघेकी छिन् भने ५ प्रतिशत मात्र फर्टइल अण्डा हुन्छ ।
– किताबी भाषामा हेर्ने हो भने २५ वर्ष सम्ममा गर्भवति भएको राम्रो हो । तर अहिलेको अवस्थामा यो उमेर अलि उपयुक्त नहुन सक्छ किनकि महिलाहरुको बिहे नै २५ वर्षमा भएको हुँदैन । पढाई, करियरको पछाडी दौडीदा दौडीदै बिहे नै ढिलो हुने भएकोले २५ देखि ३० वर्षको उमेरमा पहिले प्रेग्नेन्सि हुँदा सुरक्षित हुन्छ । ३० देखि ३५ वर्ष उमेरमा प्रेग्निेन्सी नहुने भनेको होइन तर जति उमेर बढ्दै गयो । स्वस्थ समस्या बढ्ने खतरा पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ ।
– पुरुषहरु पनि करियर तथा अध्ययनमा केन्द्रित भएर ढिलो विवाह गर्छन् । भविस्यको बारेमा धेरै चिन्तित हुन्छन् र बच्चा ढिलो जन्माउने योजना बनाउँछन् तर, महिलाको तुलनामा पुरुषहरुको अण्डाको फर्टाइल हुने उमेर भने अलि बढि हुन्छ । ४० वर्ष सम्म पुरुषहरुको अण्डा फर्टाइल हुन्छ । ​​​​​​​
गर्भावस्थामा सेक्स गर्दा यी कुरामा ध्यान दिऔं - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] गर्भावस्था जोडीको लागि एकदमै महत्वपूर्ण समय हो । यो अवस्था एकदमै जोखिमपूर्ण पनि हो । केही जानीनजानी गल्ती गरेमा ठूलो नोक्सानी बेर्होनुपर्ने हुन्छ । गर्भावस्थामा सेक्स गर्नु, स्वास्थ्य र आउनेवाला बच्चालाई कतिको असर हुन्छ त ? के गर्भावस्थामा सेक्स गनु ठीक हो त ? यस्ता प्रश्नहरू तपाईंका मन आउन सक्छन् । […]